မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်
ဒိုက်ဦးမြို့နယ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်ရှိ မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာမြို့မှာ ဒိုက်ဦးမြို့ ဖြစ်သည်။
တည်နေရာ ၊ အကျယ်အဝန်းပြင်ဆင်
မြောက်လတ္တှီကျူ့ ( ၈၇ံ ၅၀´ ) အရှေ့လောင်ဂျီကျူ့ ( ၉၇ံ ၄၈ ´ ) တွင်တည်ရှိသည် ။ ကားလမ်းမိုင်တိုင် အမှတ် ( ၇၀ / ၀ မှ ၈၈ / ၀ ) အထိရှိသည် ။ ရထားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ်မှာ ( ၆၆ / ၀ မှ ၈၄ / ၀ ) အထိရှိသည် ။ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ အလျား ( ၂၆ ) မိုင် ၊ အနံ ( ၁၉ ) မိုင် ရှိပြီး ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း ( ( ၄၇၉ . ၀၃ ) ရှိပြီး ဧကပေါင်း ( ၃၀၈၀ . ၉၇ ) ဧက ရှိသည် ။ အရှေ့ဖက်တွင် စစ်တောင်းမြစ် ၊ အနောက်ဖက်တွင် ပဲခူးရိုးမကြိုးဝိုင်းသစ်တော ၊ တောင်ဖက်တွင် ပဲခူးမြို့ ၊ မြောက်ဖက်တွင် ပြွန်တန်ဆာမြို့တို့ တည်ရှိသည် ။ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ( ၉ ) ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ( ၄၄ ) ကျေးရွာငယ်ပေါင်း ( ၁၇၈ ) ရွာတို့ပါ ဝင်သည် ။ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များ ( ၁ ) ဈေးပိုင်းရပ်ကွက် ( ၂ ) ကုန်သည်ရပ်ကွက် ( ၃ ) ဝါဆိုရပ်ကွက် ( ၄ ) ကျောင်းစုရပ်ကွက် ( ၅ ) သံတံတားရပ်ကွက် ( ၆ ) မင်းတဲရပ်ကွက် ( ၇ ) စက်ကွင်းရပ်ကွက် ( ၈ ) ဒရယ်မီးရပ် ကွက် ( ၉ ) ဖအောင်ဝဲရပ်ကွက်တို့ဖြစ်သည် ။ ထိုရပ်ကွက်ပေါင်း ( ၉ ) ရပ်ကွက်တွင် ( ၁၈ ) နှစ်အောက် ကျား/မ ပေါင်း ( ၁၃၀၆၂ ) ယောက် ။ ( ၁၈ ) နှစ်အထက် ကျား/မပေါင်း ( ၂၄၆၃၇ ) ယောက်နှင့် စုစုပေါင်းလူဦးရေ ( ၃၇၆၉၉ ) ယောက်တို့ရှိသည် ။ ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ ( ၁ ) ဆင်စခန်းကျေးရွာ ( ၂ ) ကျွန်းကုန်း ( ၃ ) အိမ်ခြေလေးဆယ် ( ၄ ) သဲကော ( ၅ ) သရက်တော ( ၆ ) ပျဉ်ပုံလေး ( ၇ ) သပြေတန်း ( ၈ ) ပသွယ် ( ၉ ) ရှမ်းစု ( ၁၀ ) ဖေါင်တော်သီ ( ၁၁ ) ပေါက်တပင် ( ၁၂ ) ကံကလေး ( ၁၃ ) ကုက္ကိုင်း ( ၁၄ ) အင်းသဇင် ( ၁၅ ) ပွဲတမော့ ( ၁၆ ) ပျဉ်းမလွင် ( ၁၇ ) ကတုတ်ရွာမ ( ၁၈ ) ကတုတ်ဘုရားကြီး ( ၁၉ ) တမံကြီး ( ၂၀ ) ဗျိုင်းချယ် ( ၂၁ ) ဘောနီ ( ၂၂ ) မအူတန်း ( ၂၃ ) ကျိုက်စကောအရှေ့ ( ၂၄ ) ကျိုက်စကောအနောက် ( ၂၅ ) ဘုရားကြီးကွင်း ( ၂၆ ) နတ်ကင်း ( ၂၇ ) ပုကိုင် ( ၂၈ ) မင်္ဂလွန်း ( ၂၉ ) သုံးခွ ( ၃၀ ) ပနွတ် ( ၃၁ ) ကလိ (၃၂ ) ဖအောင်းစု ( ၃၃ ) ကမာဖရုံ ( ၃၄ ) တကောင်း ( ၃၅ ) ရွှေအင်ဒုံ ( ၃၆ ) ဒိုးတန်း ( ၃၇ ) ဆာပါခြုံ ( ၃၈ ) တောင်သလဲမြှောင် ( ၃၉ ) စစ်ဘိုကြီး ( ၄၀ ) ဗျက်ကြီး ( ၄၁ ) ဆင်ဇလုပ် ( ၄၂ ) အုတ်ရှစ်ကုန်း ( ၄၃ ) မှော်အင်း ( ၄၄ ) ပုဂံကွဲ တို့ဖြစ်သည် ။ ထိုကျေးရွာတို့တွင် အသက် ( ၁၈ ) နှစ်အောက် ကျား/မ ( ၇၄၃၄၁ ) ယောက် ။ ( ၁၈ ) နှစ်အထက် ကျား/မ ပေါင်း ( ၁၁၆၂၂၇ ) ယောက် နှင့် စုစုပေါင်း ကျား/မ ဦးရေ ( ၁၉၀၅၆၈ ) တို့ရှိကြသည် ။ ( ၂၀၁၁ - မှတ်တမ်းစာရင်းအရဖြစ်သည် ။ ) .
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် ၊ ရေဆင်းပြင်ဆင်
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မှာ အနောက်ဖက်ခြမ်းတွင် ပဲခူးရိုးမရှိပြီး အနောက်ဖက်မှ အရှေ့ဖက်သို့ တဖြည်းဖြည်းနိမ့်ဆင်းသွားသည့် မြေနိမ့်လွင်ပြင်ဖြစ်သည် ။ မိုးရေချိန်လက်မအများဆုံး တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ ( ၁၆၇ ) နှင့် အနည်းဆုံး ( ၁၀၉ ) လက်မရရှိသည် ။ ဒရယ်မီးချောင်း ၊ ကောလိယချောင်း ၊ ဘိုင်းဒါးချောင်း ၊ ကတုတ်ချောင်း ၊ ဘောနီချောင်းများ က အနောက်မှအရှေ့သို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည် ။
လူဦးရေ ၊ လူမျိုး ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာပြင်ဆင်
ဒိုက်ဦးမြို့တွင် မြို့ပေါ်နေ ကျား/ မပေါင်း ( ၃၇၆၉၉ ) ယောက်ရှိပြီး ၊ ကျေးလက်နေ ကျား/ မပေါင်း ( ၁၅၂၈၆၉ ) ယောက်ရှိသည် ။အိမ်ထောင်စုပေါင်း မြို့ပေါ်တွင် ( ၇၂၄၈ ) ရှိပြီး ကျေးလက်တွင် ( ၃၀၆၃၀ ) ရှိသည် ။ အိမ်ခြေပေါင်း မြို့ပေါ်တွင် ( ၆၉၇၈ ) ရှိပြီး ၊ ကျေးလက်တွင် ( ၃၀၁၀၀ ) ရှိသည် ။လူဦးရေပျှမ်းမျှ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ( ၁၅၃ .၃ ) ဦးဖြစ်သည် ။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုစီ၏ ပျှမ်းမျှလူဦးရေမှာ ( ၄ . ၃ ) ဖြစ်သည် ။ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းနေ ထိုင် နိုင်ငံခြားသားများအဖြစ် တရုတ် ( ၃၆ ) အိန္ဒိယ ( ၁၇ ) ပါကစ္စတန် ( ၁ ) နှင့် စုစုပေါင်း ( ၅၄ ) တို့ဖြစ်သည် ။ တိုင်းရင်းသားများမှာ ကချင် ( ၁၀ ) ၊ ကရင် ( ၄၀၁၂ ) ၊ ချင်း ( ၁၀၈၂ ) ၊ ဗမာ ( ၁၈၂၃၃၅ ) ၊ မွန် ( ၂၅ ) ၊ ရခိုင် ( ၅၁ ) ၊ ရှမ်း ( ၄၁၂ ) ၊ အခြား ( ၂၆၅၁ ) နှင့် စုစုပေါင်း ( ၁၉၀၅၆၈ ) တို့ဖြစ်ကြသည် ။
↑ (မေ ၂၀၁၅) သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ-၂. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန, ၅၅။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုက်ဦးမြို့နယ်&oldid=494787" မှ ရယူရန်
၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။